X-Diyaarad Soo-degis Bilaash ah & Warar
Liiska maqaallada qaybta X-Diyaarad News
Jilitaannada Windsock ayaa Diyaar u ah Madaarka Madrid Diyaarad X-Diyaarad ah	 Hits: 128	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
VSKYLABS waxay ku dhawaaqeysaa Mashruuca Muuqaalka: VSL Base-5 - X-Plane	 Hits: 331	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
X-Diyaarad 11.51 La sii daayay	 Hits: 347	 Codbixinta: 1	 Rating: 5
VSKYLABS waxay ku dhawaaqeysaa XP-ga dhulka ee casriga ah	 Hits: 302	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
Orbx wuxuu sii daayaa TrueEarth EU Canary Islands XP	 Hits: 327	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
Ultra Weather XP 2.6.2 Waa la siidaayay	 Hits: 327	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
X-Diyaarad 11.51r1 Hada Laheli Karo	 Hits: 432	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
VSKYLABS Tecnam P2006T / 2021 Cusboonaysiinta Goordhow	 Hits: 360	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
VSKYLABS Waxay Dhameystirtay Guimbal Cabri V2.0 Cusbooneysiin	 Hits: 292	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
Jilitaannada aan Xaddidneyn ayaa Alderney ugu talagay X-Diyaarad	 Hits: 354	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
Orbx - Jasiiradaha Canary ee TrueEarth ee loogu talagalay X-Diyaarad	 Hits: 439	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
A321 Neo Add-On ToLiss Airbus A321	 Hits: 420	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
SimCoders waxay ku dhawaaqeysaa Xirmada Xaqiiqda Thranda DHC-2 Beaver Ku dhowaad Diyaar	 Hits: 337	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
Verticalsim Updates Tampa Wixii X-Diyaarad 11	 Hits: 584	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
iniBuilds waxay ku dhawaaqeysaa iniSimulations A310-300 - X-Diyaarad	 Hits: 478	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
VSKYLABS Cusbooneysiinta Guimbal Cabri G2	 Hits: 389	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
iniBuilds wuxuu ku dhawaaqayaa A300-600 v1.10 oo loogu talagalay X-Diyaarad	 Hits: 783	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
ToLiss waxay faahfaahin ka bixisaa cusbooneysiinta A321 v1.2	 Hits: 650	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
Nimbus Istuudiyo Istuudiyaha Cusbooneysiinta UH-1 ee loogu talagalay X-Plane 11	 Hits: 353	 Codbixinta: 1	 Rating: 5
VSKYLABS Tecnam P2006T 2021 v7.0 Coming Soon	 Hits: 412	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
Cusboonaysiinta Simheaven x-Europe Ilaa V5.3	 Hits: 391	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
X-Diyaarad 11.51 Beta 2 Dayactir Cayaaraha	 Hits: 599	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
Nimbus jilitaanka Jasiiradda X-Diyaarad Ku Dhow Diyaar	 Hits: 393	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
VSKYLABS Tecnam P2006T Project v7.0 Goor dhow	 Hits: 550	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
Orbx - EGNT garoonka diyaaradaha caalamiga ee Newcastle X-Diyaarad 11	 Hits: 665	 Codbixinta: 0	 Rating: 0
X-Diyaarad News Latest
Cusbooneysiinta VSKYLABS ee Aeroprakt A22-LS Project XP
Mashruuca VSKYLABS Aeroprakt A22-LS ee loogu talagalay X-Plane oo ay soo saartay Laminar Research (dhowaan soo socda!). Daaqadda sii deynta waxaa loo dejiyay usbuucii ugu dambeeyay Abriil 2021, haddii wax walba u dhacaan sidii la filayay! Waa kuwan dhowr shaashad ...
Verticalsim waxay ku dhawaaqeysaa Fayetteville Diyaarad X-Plane ah
Waxaan jeclahay inaan ku dhawaaqo mashruucayga xiga ee X-Plane 11! Gagada Diyaaradaha ee Fayetteville (KFAY), oo sidoo kale loo yaqaan Grannis Field, waa garoon diyaaradeed oo dadweynuhu ku adeegto oo ku yaal Degmada Cumberland, North Carolina, Mareykanka ...
Naqshadeynta ShortFinal waxay soosaaraysaa Freeware Boston V2 oo loogu talagalay X-Plane
Boston V2 waa soo baxday! Soo bandhigaya JAM jetways caadooyin ah, qaab dhismeedka dhulka cusub iyo boosteejooyin cusub oo la dhisay! Hubso inaad soo dejiso cusboonaysiinta Maktabadda MisterX sidoo kale. Iyo sidoo kale wax yar oo ku saabsan waxa soo socda ...
VSKYLABS Aeroprakt A22-LS Mashruuca X-Diyaarad
Mashruuca VSKYLABS Aeroprakt A22-LS ee loogu talagalay X-Diyaaradda ee ay samaysay Laminar Research (dhowaan soo socda!) News Flash! Nidaamka Soo-kabashada Parachute waxaa la rakibay usbuucii la soo dhaafay wuxuuna u shaqeeyaa sidii la filaayay. Duulimaadkii hore ee VR ...